राजनीति / फिचर / विशेष
२०७८ चैत ०१ मंगलबार
काठमाडौं - कक्षा ७ मा पढ्दै थिइन् । भर्खरै १२ वर्षकी थिइन् । किशोरावस्थाले छोइसकेको थियो । बालापनको सौख पूरा गरेर किशोरावस्थाको यौवन चढिसकेको थियो । स्कुलमा पढ्नुभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापमा बढी ध्यान जान्थ्यो । अर्कोतिर तत्कालीन समय पनि त्यस्तै थियो ।
कापीकलमबाहेक केही नदेखेकी शोभाको हातमा भारी हतियार थमाइयो । माओवादीले देखाएको सपना उनलाई आफ्नै सपना लाग्थ्यो । त्यही भएर उनले आफ्नो यौवनलाई नै धरापमा राखेर युद्धमा होमिइन् । ‘त्यो बेला त माओवादी के हो ? जनयुद्ध के हो ? भन्ने केही पनि थाहा थिइन् । रमाइलोका लागि माओवादीमा लागियो,’ शोभाले भनिन् ।
घरपरिवार, आमाबुबाको काखमा हुर्किनुपर्ने उमेरमा उनी गरिबी, असमानता, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने भन्दै अग्रपंक्तिमा उभिएर लड्ने अठोट लिइन् । उनलाई त्यो बेला जोश–जाँगर पनि खुबै चल्थ्यो । ‘हामीलाई त्यस्तै तरिकाले तालिम दिइन्थ्यो । युद्धमा होमिएपछि त अरूलाई सिध्याउनुपर्छ भन्नेबाहेक केही हुन्नथ्यो,’ शोभाले त्यसबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै भनिन् ।
उनले पाँचवटा लडाइँ लडिन् । पहिलो लडाइँ उनले मकवानपुरको जुरजुरेमा लड्ने मौका पाइन् । लड्नुअघि उनलाई खुबै डर थियो । जब गनबाट फायर खोलिन्, त्यसपछि एकाएक साहस जाग्यो । र, लडाइँ नसकिँदासम्म अग्रपंक्तिमा खटिइरहिन् । ‘लड्ने बेला त आफू मर्छु होला भन्ने पनि मनमा सोच नआउँदो रहेछ । हुन त या मरिन्छ या त अरूलाई मारिन्छ भनेर नै लडाइँमा जाने हो,’ शोभाले भनिन् ।
२०६३ सालमा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । उनले बल्ल मुक्तिको श्वास फेर्न पाइन् । र, अब क्रान्ति पूरा भएको भान भयो । तर, अहिले आएर उनलाई युद्ध किन लडेको भनेर पछुतो हुन्छ । युद्ध लडेर उनी रित्तो हात घर फर्किइन् । ‘आफूसँगै लडेका साथीहरू कोही समायोजनमा गए । कोही राहत प्याकेज लिएर घर फर्किए । तर मलाई भने बाल लडाकू भनेर त्यो पनि अयोग्यको बिल्ला भिराएर घर पठाइयो,’ शोभाले भनिन् ।
एकातिर पढाइ छैन । अर्कोतिर हातमा कुनै सीप भए त्यसबाटै जीविकोपार्जन गर्न सकिन्थ्यो । शोभाको हातमा पढाइको सर्टिफिकेट हुन्थ्यो भने विदेशै गएर पनि गुजारा चलाउन सक्थिन् । ‘पढ्ने उमेरमा अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै बन्दुक भिरेर लड्न हिँडियो,’ शोभा भन्छिन्, ‘अहिले आएर आफ्नो भाग्यले नै छल गरे जस्तो लाग्छ ।’ अहिले उनी काँडाघारी मूलपानीमा किराना पसल चलाएर बसेकी छन् । जसले दैनिक गर्जो टार्न पनि धौ धौ हुन्छ ।
आफ्नो योग्यताअनुसार केही न केही व्यवस्था मिलाइदिन राज्यसँग पटक–पटक गुहार मागिन् । तत्कालीन जनयुद्धका कमान्डर तथा नेतृत्वसँग पटक–पटक छलफल गरिन् । तर, जतिबेला पनि आश्वासनबाहेक केही पाइनन् ।‘खाली आश्वासन मात्र दिने । काम केही नगर्ने भएपछि भेट्न किन जानु पर्‍यो ?’ शोभाले प्रश्न गरिन्, ‘हामी ज्यानको बाजी थापेर युद्धमा होमियौं । तर, उहाँहरूले मलगायत चार हजार आठजनालाई रोडमा ल्याएर छोड्नुभयो । अहिले आएर अयोग्य बाल लडाकू भनेर विशेषण दिइयो । १२ वर्षको उमेरमा बन्दुक समाउन कसलाई रहर हुन्छ र ?’
उनीहरूलाई त अहिले माओवादी पार्टी र माओवादी नेताहरूप्रति वितृष्णा जागेको छ । युद्धबाट बाहिरिएको पनि दशौं वर्ष भइसक्यो । तर, त्यसका पीडा र घाउँ अझै पनि कम भएको छैन । यतिबेला उनीमाथि घरपरिवारसँगै समाजको पनि प्रश्नको थुप्रो छ । अहिले के पायौं ? के–के न हुन्छ भनेर गएकी थियौं, के भयो ? आफ्नै जिन्दगी बर्बाद गरेर आखिर के पायौं ? घरपरिवारबाट बारम्बार आउने प्रश्न हो यो ।